Nge-Agasti 2018-IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2018 / EyeThupha
ezaposwa ngomhla Agasti 30, 2018
I-IRN yindlela enomdla kwindlela zonxibelelwano ngonomathotholo ezi-2. Ngalo naliphi na ixesha, unokubona ukuba zeziphi iifowuni ezikwi-Intanethi ze-QSO entle. Jonga uluhlu apha.
ezaposwa ngomhla Agasti 9, 2018 Septemba 21, 2018
Iindaba ezimnandi kubathandi benomathotholo yenethiwekhi! U-Inrico usungule T192, Inguqulelo ephuculweyo yefayile ye- T199.
Nangona ndingumlandeli omkhulu we-T199 kufuneka ndiyivume T192 linyathelo elihle.
Ndiza kuqala kuyilo. Imilo yoxande, ikhumbuza oonomathotholo abaziwayo beMotorola. Ndihlala ndiyifumana i-T199 incinci kakhulu, indikhumbuza i-walkie-talkie yabantwana. I-T192 inzima, iyatyeba, kwaye ngaphezulu kwako konke, yi-IP54, ngokungafaniyo ne-T199.
Ukunika ukhuseleko olongezelelekileyo, ibhetri inesitshixo sayo (ndiyathandabuza ungasusa ngempazamo ibhetri ngaphandle kokusebenzisa ilokhari yesibini). Ezi nkcukacha zincinci zenza i-T192 ibe ngumsakazo onqabileyo ngokwenene!
Isandi, njengesiqhelo sinokusetwa kwivolumu ephezulu yokwenyani, ngelixa ugcina isandi sentetho esigcweleyo. Ndiqinisekile ukuba le radio iyakuba ngumthengisi ophambili.
Njengoko uyazi, ezi radios zenzelwe ukusetyenziswa kobuchwephesha kwaye ziqhuba iinkonzo ezinje nge-PTT4U. Ke abafuni ukuba abasebenzisi baphazamise useto kunye nokufaka ii -apps ezingafunekiyo. Ngaloo ndlela, kwi T192, U-Inrico ususe isokhethi se-USB ukuze umsebenzisi "oqhelekileyo" angabinakwenza naluphi na utshintsho kuqwalaselo.
I-USB isekhona, nangona ifihliwe. Kufuneka uqhoboshele encinci Iadaptha ye-5-pin (ibandakanyiwe intambo yenkqubo) kwaye wenze konke ukumiliselwa kwirediyo, usebenzisa iTotalControl software.
Zonke iisetingi zenethiwekhi kufuneka zenziwe ngokusebenzisa iziseko zemic / zeefowuni, kusetyenziswa intambo yenkqubo. Uya kuyidinga le nto software kwaye i Abaqhubi beUART ukuyisebenzisa.
ukusukela V4.14I-Zello i-100% iyahambelana ne-T192. Ungatshintsha ivolumu, usebenzise iqhosha le-PTT kwaye ukhethe amajelo usebenzisa iqhosha lokudayela. Kufuneka ulandele amanyathelo oqwalaselo ikhutshwe nguZello.
Ungayithenga phi i-T192?
Hlela i-T192 yakho apha